Nécrologie du 31 juillet 2021 - ewa.mg
News - Nécrologie du 31 juillet 2021
L’article Nécrologie du 31 juillet 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Mampanahy ny mety hiforonan’ny rivodoza ao avaratra atsinanan’ny Nosy, araka ireo tangoron-drahona mitondra orana miaraka amin’ny rivotra manodidina ny 20 ka hatramin’ny 40km isan’ora.Arahi-maso akaiky, araka izany, ny fivoarany ary efa entanina sahady ny mponina ao amin’ny faritra Diana hanaraka akaiky ny vaovaon’ny toetr’andro hahafantarana ny fihomanana rehetra tokony hatao.Eysy an-daniny, mbola hanelingelina ny fifamezivezena eny an-dranomasina amin’ny morontsiraka atsimo-andrefana sy atsimon’i Madagasikara ny fisian’ny alon-drano vaventy avy amin’ilay rivodoza Guambe, manomboka anio alatsinainy hatramin’ny alarobia maraina.Mety hahatratra 3m hatramin’ny 3.5m ny haavon’ny onja. Tsy azo atao mihitsy, araka izany, ny miandriaka.Hisy fidinany tsikelikely ihany koa ny maripana ho an’ny tapany avaratra atsimon’ny Nosy ato anatin’ny telo andro ho avy vokatr’io andian-drahona mety hivadika ho andro ratsy io.Tatiana AL’article Toetr’andro: manambana ny rivodoza a été récupéré chez Newsmada.
Fanatsarana ny famokarana: miditra amin’ny teknolojia niomerika ny tantsaha
Paikady vaovao hanatsarana ny tontolo sy ny famokarana ambanivohitra ny fampiasana ny teknolojia niomerika. Eo koa ny fikirakirana vola ampiasana izany teknolojia izany.Manohana ny famokarana eny ambanivohitra eto amintsika amin’ny fanamaivanana ny fiantraikan’ny tranga Covid-19 ny fanjakana alemà. Manatanteraka azy ny Fiaraha-miasa alemana GIZ, ao anatin’ny Tetikasa fiatrehan’ny rohim-pihariana ambanivohitra manoloana ny fiovan’ny toetr’andro (Prada) sy ny Tetikasa fiarovana ny nofon-tany (Prosol), mitotaly 1 650 000 euros. Haharitra 12 volana ny asa, mifantoka amin’ny fampiofanana ny tantsaha ho matihanina, amin’ny lafiny fitantanana teknika sy vola, ao anatin’ny Farmer Business School (FBS). Nilaza ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), Ranarivelo Lucien, fa hahazo famatsiam-bola mivantana ny tantsaha hita fa tena mazoto, amin’ny alalan’ny MVola. Homena mivantana ny tantsaha mendrika ny 76%-n’ny famatsiam-bolan’ny fandaharanasa amin’ny alalan’ny Dokany mora ho an’ny mpamokatra (DMM), rafitra natsangana hikirakira ara-informatika ny momba ny tantsaha amin’ny alalan’ny teknolojia niomerika. Miisa 3 200 ny tantsaha kendrena hahazo tombontsoa amin’izany, manerana ny distrika valo ao anatin’ny faritra efatra (Voakasiky ny fandaharanasa ny faritra efatra (Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana ary Boeny)) iasan’ny GIZ eto Madagasikara.Miara-miombona antoka amin’ny fanatanterahana ity tetikasa, tohanan’ny GIZ vola, ity ny minisitera Maep sy ny Fondation Axian, orinasa renin’ny Telma sy ny MVola SA, mikasika ny fifanakalozam-bola amin’ny alalan’ny MVola. Eo koa ny Maep sy ny Sekoly ambony misahana ny fambolena (ESSA), eny amin’ny oniversite Antananarivo.Njaka AndriantefiarinesyL’article Fanatsarana ny famokarana: miditra amin’ny teknolojia niomerika ny tantsaha a été récupéré chez Newsmada.
Raha ny salanisa navoakan’ny CCO, olona telo indray no matin’ny covid-19 ny alatsinain’ny Paska teo. Iray teto Analamanga, iray tany Atsimo Andrefana ary iray tany Anôsy. Mitontaly 165 kosa ny tranga vaovao tamin’ireo 528 nanaovana fitiliana ny andron’io alatsinain’ny Paska io. 118 tamin’ireo tranga ireo dia teto Analamanga avokoa.271 ny marary mafy mampiseho tranga fahasarotana ka arahi-maso akaiky ny fahasalamany eny amin’ny hopitaly sy ny CTC19. 2.595 kosa no manaraka fitsaboana amin’izao fotoana izay misy ny soritr’aretina.Etsy andanin’izany, misy ny sitrana miisa 111 ka 63 tamin’ireo eto Analamanga.Isa navoakan’ny CCO io telo maty io fa ny maty eny anivon’ny fiarahamonina ihany koa dia maro ary saika sempotra sy maty tao anatin’ny fotoana fohy nahitana trangan’aretina mitovy amin’ny covid-19 ihany. Manaporofo izany indrindra ny hamaroan’ny fahazoan-dalana mandevina alaina eny amin’ny kaominina sy ny filazana manjo mameno ny tanàna.Tatiana AL’article Ny alatsinain’ny Paska: olona 3 matin’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Tetikasa Perform: hofanina ny mpampianatra eny amin’ny ENS
Natomboka ny herinandro lasa teo ny tetikasa Perform ho fanatsarana ny fahaiza manaon’ny mpampianatra ka hahazoana kalitao tsara amin’ny fampianarana eto amintsika. Mandritra ny telo taona ny tetikasa iarahana amin’ny agence universitaire de la francophonie (AUF) ary vatsin’ny fandaharasana Erasmus sy ny Vondrona eoropeanina. Asa voalohany hotanterahina ny fanofanana ny mpampianatra rehetra eny amin’ny Ecole normale supérieure misy sy ny Ecole normale supérieures pour l‘enseignement technique. Homena tohana koa ny mpampianatra eny anivon’ny lycée ka tsy nahazo fiofanana mialoha ny nidirana tamin’ny sehatry ny fampianarana. Mandritra ny telo taona, hanofana mpampianatra eny amin’ny ENS sy ny ENSET 185 ny tomponandraikitra miampy mpampianatra 1 000 avy eny amin’ny lycée ho an’ny taranja fototra (mathématique, physique-chimie, français…).Vonona hatrany ny AUF hanohana ny fanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara, hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena.Vonjy A. L’article Tetikasa Perform: hofanina ny mpampianatra eny amin’ny ENS a été récupéré chez Newsmada.
Mahazoarivo: notsinjovina manokana ny zokiolona sy ny ankizy
Nijery manokana ireo loharano nipoirana sy ireo hoavin’ny firenena ny fiadidiana ny Primatiroa, tamin’ny fetin’ny fahaleovantenan’i Madagasikara iny. Notolorany fanomezana ireo zokiolona sy ny ankizy manidika, monina eny amin’ny fokontanin’i Mahazoarivo, toerana misy ny primatiora.Tonga nanotrona sy nitarika ny fotoana ny sekretera jeneralin’ny governemanta, Razanadrainiarison Rondro Lucette, izay nisolo tena ny Praiminisitra, Ntsay Christian. “Mbola ady sarotra ho antsika izany fahaleovantena izany, satria mbola maro ny olona sahirana ary ao anatin’ny adidin’ny mpitondra ny mitsinjo hatrany ny hampifaly sy hanasoa ny mpiara-monina ary ny mpiray tanindrazana”, hoy izy.Izay indrindra ny antony nanomezana tombony manokana ireo zokiolona, raiamandreny, sy ireo solofo dimbin’ny ala, hoavin’ny firenena rahatrizay. Nambaran’ity tompon’andraikitra ity fa rariny loatra raha miara-paly amin’izy ireo, tamin’iny Asaramanitra iny.Randria. L’article Mahazoarivo: notsinjovina manokana ny zokiolona sy ny ankizy a été récupéré chez Newsmada.